Gudigii Doorashada Farmaajo oo lagu amray inay ka guuraan hoteelada ay deganaayeen - Muqdisho Online. Caasimada Muqdisho
Home Wararka Gudigii Doorashada Farmaajo oo lagu amray inay ka guuraan hoteelada ay deganaayeen
Gudigii Doorashada Farmaajo oo lagu amray inay ka guuraan hoteelada ay deganaayeen
Sida ay sheegayaan warar lagu kalsoon yahay Guddigii Doorashada ee lagu muransanaa ee Farmaajo sameystay ayaa lagu amray hoteelada iyo guryihii ay deganaayeen in ay ka baxaan kama danbeeys 25ka bishan. Wixii ka danbeeya bishaana iyaga ayaa ka mas’uul ah bixinta lacagta ku baxdo deegaanada ay degan yihiin.
Xubno ka tirsan guddiga ayaa xaqiijiyay in lagu wargeliyay in ay ka guuraan goobaha la dejiyay oo ay ka mid ahaayeen hoteel ku dhow garoonka diyaaradaha. Sidoo kale waxa la sheegayaa in hogaanka guddiyada ay caawa afur ku leeyihiin xafiiska Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya iyaga oo rajo ka qabo in deegaanadaas lagu sii hayo.
Farmaajo ayaa albaab kastaa uu ka soo xirmay, waxa uuna ku qasban yahay in dalka aado doorasho loo dhan yahay. Waxaana muuqata in uu ka tanaasulayo waqti kodhintii hore.